Olee otu Ahịa Marketing Na-emetụta Ọchịchọ Ọchụchọ | Martech Zone
Dika algorithms ihe nchoputa na-adi nma na ichota na ichota ihe kwesiri ekwesiri, ohere maka ulo oru ndi na etinye aka na ahia di elu karie. Ihe omuma a site na QuickSprout na -ekere ụfọdụ ịrịba ọnụ ọgụgụ na-apụghị ileghara anya:
Ndị ụlọ ọrụ nwere blọọgụ nata 97% ndị ọzọ na-eduga karịa ụlọ ọrụ na-enweghị blọọgụ.
61% nke ndi ahia na-eche mma banyere a ụlọ ọrụ nke ahụ nwere blọọgụ.
Ọkara ndị ahịa niile na-ekwu na azụmaahịa ọdịnaya nwere mmetụta dị mma na mkpebi ịzụta ha.
Ebe nrụọrụ weebụ nwere blọọgụ nwere 434% karịa peeji edepụtara na nkezi karịa ndị na-enweghị.
Ogologo ọdụ dị 68% kemgbe 2004.
Ọ dị ezigbo mfe… ọdịnaya bụ nri ọchụchọ na-adabere na ya. Nye nri ugboro ugboro, na nso nso a dị mkpa yana, ka oge na-aga, saịtị gị ga-ewulite injinị ikike ikike, kwalite nke ọma, ma chụpụ ụzọ dị mkpa na saịtị gị.
Tags: content Marketingndeputa peejiogologo-ọdụọchụchọ ọkwaA